दाहालसँग ओली ‘फायर’, भेटवार्ता अनिश्चित् ! – Himshikharnews.com
दाहालसँग ओली ‘फायर’, भेटवार्ता अनिश्चित् !
२९ असार २०७७, सोमबार २०:२१
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्ला दिनमा वार्ता तथा भेटघाट नै हुन सकेको छैन् । पार्टीको स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक अध्यक्षद्धयबीचको विवादका कारण स्थगित् हुँदै आएको छ । अर्को बैठक साउन २ गते बस्ने भएको छ । यो बीचमा अध्यक्षद्धयबीच सहमतिको प्रयास गरिने नेताहरुले जनाएका छन् ।
असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरुले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, ओलीले भने आफूले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुले पनि नेतृत्वलाई मिलेरै अघि बढ्न दबाब दिईरहेका छन् । यसको लागि कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छन् ।
मुलुक यतिवेला राष्ट्रिय विपतमा परेको भन्दै गत शुक्रबार नै एक साताका लागि बैठक स्थगित् गरिएको हो । दाहाल त्यही दिन गृह जिल्ला चितवन पुगेका थिए । उनी बाढिपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै बाढि, पहिरो समस्याको दिर्घकालिन समाधानको लागि काम गर्ने विश्वास दिलाए । दाहालले चितवनमा पार्टीको आन्तरिक विवादमा केन्द्रित रहेरपनि भाषण गरेका थिए ।
उनले आफू र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमति हुने आशय व्यक्त गरेका थिए । त्यतिमात्रै होईन, उनले पार्टीभित्र गम्भिर समस्या रहेकोले यसलाई नेताहरुले मिलेर समाधान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसको साथै, उनले नेकपा चितवनले आईतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै आफू र अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साउने प्रवृत्ति रहेकोले सावधान रहनु पर्ने बताएका थिए । उनको भनाई थियो-‘हामी नेताहरूलाई एउटाले गएर केपीलाई प्रचण्डलाई छोड्न हुन्न भनेर उक्साउने। अर्को आएर प्रचण्डलाई केपीलाई छोड्न हुन्न भनेर उक्साउने प्रवृत्तिहरूप्रति सावधान रहन र तपाईंहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने त्यहाँनेर हो ।’
दाहालले सम्बोधनको क्रममा अघि भनेका थिए,‘‘यो पार्टीलाई एकतावद्ध राख्नु नै छ, यहाँ कोही राष्ट्रघाती दलाल, कोही महान राष्ट्रवादी भन्ने होइन। हामी सबै मिलेरै नाकाबन्दीको सामना गरेको हो। हामी सबै मिलेरै नक्सा बनाएको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा मैले बोल्दा होस् या सबैले सरकारलाई, कमरेड केपी ओलीलाई धन्यवाद दिइएको छ। नक्सालाई तपाईं प्रधानमन्त्रीको हैसियतले वैधानिकता दिन र औपचारिकता दिनुभयो। के राष्ट्रवाद जिन्दावाद र मुर्दावादको कुरा हो ?’
दाहाल दुई दिन चितवन बसेर आज काठमाडौं फर्किएका छन् । उनी चितवन गएको दिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम थियो । यो कुरा स्वयम दाहालले पनि चितवनमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले स्पष्ट पारेका थिए । ओलीसँगको भेटवार्ता छोडेर आफू बाढि, पहिरोले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न चितवन आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । दाहाल आज काठमाडौं फर्किएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ता भने अनिश्चित बनेको छ । दाहालले चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्ता पनि अनिश्चित बनेको छ । दाहालले ओलीलाई राष्ट्रबादी बन्न नखोजे हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई छ । र, उनी दाहालसँग यही अभिव्यक्तिलाई लिएर ‘फायर’ छन् । reportersnepal.com